Waa'ee uffannaa keessaniif ni dhimmamtuu? - BBC News Afaan Oromoo
Waa'ee uffannaa keessaniif ni dhimmamtuu?
15 Caamsa 2018
Goodayyaa suuraa Namni yeroo baay'ee daawitii keessatti of ilaaluun uffatasaa qajeelfata
Danbiin uffannaa (dressing code) barreeffamaan kan hin teenye seeraa akkaataa itti uffatan ilaallatudha. Yeroo baayyee namoonni uffanni manaafi kan hojii kana fakkaachuu qaba jedhanii murteeffachuun waan baramaadha.
Danbiin uffannaa biyya gara garaatti qofaa osoo hin taane aadaafi amantaawwan gara garaarratti hundaa'uudhaan addaa adda ta'uu ni danda'a.
Maatii moototaaf, qacarrii hojiidhaaf, cidhaaf, eebbaaf, gaddaaf, guyyaa ayyaanotaafi kan brioo keessatii uffanni uffataman seeraafi danbii mataasaanii qabu.
Bara ammayoome kana keessattis baayyee kan leellifamu ta'uu baatus, mootummaafi namoonni dhuunfaa dhaabbileen bulchan keessatti sirnaafi danbii uffannaa ni qabu.
Baankonni danbii uffannaa hin jijjiiramne warra qaban keessaa tokkodha.
Industirii kana keessatti uffannaan gosa tokko ta'e kan baramedha. Kun ammoo tajaajila ykn hojii keessa hojjettu keessatti waan ibsu qaba jedha hojjetaa baankii kan ta'e Habtom Kiroos.
"Kopheeraa, akkaataa rifeensaa/dabbasaa (dhiiraafi dubaraaf), waantota ittiin of miidhagsanirraa eegalee kan mataa isaa kan ta'e waan wal fakkaataa ta'e qaba. Uffannaatiin tajaajila kenninuuf kabaja qabnu ibsuufi maqaa gaarii uummachuuf kan karoorfamedha," jedha.
Guyyoota darban waajirri Pirezedaantii Itoophiyaa hojiiwwan Pirezedaantichi hojjetu gabaasuudhaaf kan dhufan hojjetoonni miidiyalee garagaraa haalli uffannaa isaanii kan kabajaafi sadarkaa Pirezedaantichaa eege akka uffachuu qabaniif waajira dhimmoota komunikeeshiniif xalayaa ergeera.
Haala uffannaan ogeessonni kun amma qaban kan kabaja pirezedaantichaa hin gitine ta'uu dhiisuu caalaa maqaa gaarii biyyaa ijaaruu keessattillee dhiibbaa kan qabu ta'ee waan argameef ogeessonni kun uffata sadarkaasaa eeggate akka fayyadaman ibseera, xalayaa sun.
Haata'u malee danbiin uffannaa geezexeessummaa Itoophiyaa keessatti kan barame miti jedha gaazexeessaa Daawwit Indashaaw.
"Biyya keenya keessatti sirni uffannaa gaazexeessummaa hin jiru. Kana waliin walqabatee, xalayaan waajjira pirezedaantiirraa ba'e waa'ee uffata uffatamuu qabuu ifatti kan kaa'e hin jiru," jedha.
Dhaabbileen dambiin uffataa keessatti sirriitti kabajamu kan akka baankiifi daandii xiyyaaraafi industiriiwwan kanaan walfakkaataniin alatti, yeroo ammaa dhaabbileen miidiyaa tokko tokko yeroo ogeessonni gabaasaaf gara biyya alaa deeman uffata kabajaa qabu uffachuufi miidhaganii akka deeman qajeelfama baasanii hojiirra oolchaa jiru.
Faashiniifi faayaarra kan hojjettu gaazexeessituu Elsaa Asaffaa, hojii qofaaf osoo hin taane, uffanni nuti guyyaa guyyaatti uffannu eenyummaa keenya ibsuu keessatti humna waan qabaniif gaazexeessitoonni uffata sadarkaasaa eeggate uffachuu qabu.
"Uffanni akka namaatti kan ofii keenya ittiin of beeksisnu waan ta'eef baratamuu qaba. Gaazexeessaan ammoo namoota gurguddoo waliin waan wal argaa oolaniif, karaa tokkoo ofii isaaniifi karaa biraa ammoo dhaabbata isaanii waan bakka bu'aniif uffata qulqulluufi sadarkaasaa eeggate uffachuu qabu," jechuun BBC'tti himteetti.
Namoonni sekondii toorba keessatti namni tokko uffannaa qabuun nama akkamii akka ta'e tilmaama waa'ee qoorqalbiisaa humna baruu qabu jedhama.
Kun ammoo, umurii, saala, amantii, jireenyaafi amantaarratti kan hundaa'e ta'uu isaa ogeessonni ni dubbatu.
Haata'u malee, keessattuu gaazexeessitootaaf danbiin uffannaa hordofuu qabanii akka kan hojjetoota dhaabbilee biroo haa ta'u yoo jedhame gaaffiin dandeettii kakka kaasaniif sababii ta'a.
Guyyaa guyyaadhan uffata walfakkaataa ta'e hojiirra oolchuudhaaf dinagdeen nama dandeessisu jiraachuu qaba jedhu.
"Gaaffii kanaaf dandeettiin argamee yoo guutameef ogummafis ta'e ofiifis kabaja gaariidha.
"Akka gaazexeessaatti akkuma uffanneen isuma uffanneen kaanee deemna. Biyya keenyatti kan hin baramiin, akka masaraa mootummaarraa gabaasuuf namni dhaabbataan ramadame waan hin jirreef gaazexeessaan waajira pirezedaantii deemu hordofuu dhiisuu mala. Kun fala yoo argate garuu danbii uffannaa eeguun ni danda'ama."
Haala kamiiniyyu namni uffannaa gaarii qabaachuu qaba kan jetti Elsaan, odeeffannoowwan haarawaa waan namootaan geenyuuf waan hunda caalaa of qopheessuun nurra yoo jiraateyyu hojiin gaazexeessummaas kan nama jajjabeessu ta'uu qaba jetti.
"Gaazexeessaan galii argaturraa danbii uffannaa eeggachuu qaba kan jedhu rakkisaadha. Dhaabbileen tokko tokko garuu danbiin uffannaa akka jiraatu dirqisiisu. Kana gochuuf ammoo deggersa ni taasisu. Haala kanaan yoohojjetameefi jijjiiramni yoo dhufee, hojii hojjennuuf gaariidha," jetti.
Danbii uffannaa hojiirra oolchuun maaliif barbaachise?
Uffata bakkaafi umuriin barbaachisuu kan uummanni barbaadu jiru.
Uffanni kun jireenya keenya guyyaa gara guyyaa keessatti dhiibbaa waan qabaatuuf, danbiiwwan kaa'aman kana akka hojiirra oolchinu nurraa eegama.
Gara dhaabbileetti yoo dhufnu garuu, akka amalli hojii sanaa barbaadutti uffata uffachuu qabna jedha gorsaan pirootokoolii Obbo Abbabaa Muluu.
Hawwaasummaa, hojiifi biyyoolessa jedhamuun bakka sadiitti qoodamu kan jedhu gorsaan kun bulchitoonni biyya lamaa yeroo wal argan sirna jiraatu akka fakkeenyatti kaasa.
"Akkaataan uffannaafi nameenyaan dhaabbata tokko waliin kan deeman ta'uu qabu. Amalaafi dandeettii nama waliin haasawaa sirrii taasisuun alatti dhaabbiin keenya diidaan argamu safartuu akka addunyaatti ilaalamu qaba," jedha Obbo Abbabaan.
Haata'u malee, haala amma jiru kanaan garuu danbiin uffannaa ogummaawwan garaa garaa keessatti hojiirra oolchuuf rakkisaadha.
"Biyyoota guddatan keessatti barattoon erga Yuunvarsiitiirraa eebbifamanii booda bakki leenjii qophaa'ummaa itti taasisan ni jira. Biyya keenytatti garuu barsiisanii eebbisuu malee attamitti akka ragaafi muuxannoo ofii barreeffatanii hojii ittiin barbaaddatan kan qopheessu hin jiru".
Uffata isa kami?
Amma ogeesson miidiyaafi kominikeeshinii uffata sadarkaa isaa eeggate akka uffataniifi kan barbaadame, uffata isa kam akka ta'e waanti beekame hin jiru.
Pirootookoolii yeroo jennu isa kan warra Ameerikaafi Awurooppaamoo isa kamidha kan jedhu gaaffii ni kaasa.
Haalli uffannaa maqaa biyyaa gaarii uumuuf ga'ee akka qabu kan dubbatan ogeessonni kunneen, carraa kanaan uffanni aadaallee danbii uffannaa keessa galuu qaba jedhan.